Dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo ka dhacay gudaha gobolka Shabeellaha Dhexe - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaDagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo ka dhacay gudaha gobolka Shabeellaha Dhexe
Dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab oo ka dhacay gudaha gobolka Shabeellaha Dhexe. [Sawirka: Archive]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab ayaa maanta oo Talaado ah ka dhacay gudaha gobolka Shabeellaha Dhexe, sida uu sheegay masuul dowladda katirsan.
Abaanduulaha ciidamada xooga Soomaaliya Janaraal Cabdulaahi Cali Caanood ayaa warbaahinta u sheegay in dagaalka uu qarxay kadib markii ciidanka dowladda iyo kuwa AMISOM ay duulaan ku qaadeen deegaano ay maamusho Al-Shabaab oo kuyaala Shabeellaha Dhexe.
Dagaalka ayaa waxa lagu soo waramayaa in uu ka dhashay khasaare soo gaaray labada dhinac, balse lama xaqiijin karo inta uu la egyahay.
Abaanduulaha ciidamada Soomaaliya Janaraal Cabdulaahi Cali Caanood ayaa dhawaan sheegay in ciidamadu ay qaadi doonaan howlgalo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan koonfurta Soomaaliya.
Bishii April ee sanadkan, Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa iclaamiyay guluf ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab.
Al-Shabaab ayaa sannooyinkii ugu dambeeyay u dagaalamaysay sidii ay awooda uga tuuri lahayd dowladda Soomaaliya oo fadhigeedu yahay Muqdisho.
U tacsiyaynta geerida hoggaamiyihii Shuuciga ahaa ee dalka Cuba ayay ku kala qaybsameen dadka Soomaalida iyo Itoobiyaanka kadib markii shalay uu dhintay isaga oo 90-jir ah. Bishii Febraayo 1977-dii, Fidel Castro ayaa 1000 ciidamo ah [...]